U habeynta KDE ilaa xad | Laga soo bilaabo Linux
x11tete11x | | Muuqaal / Shakhsiyeyn
Waa hagaag, kani waa qoraal aan sugayo muddo dheer, dad badan ayaa i weydiiya sida aan wax uga beddeli karo KDE-ga ay tahay sidan oo kale:
1 Habeynta KDE
2 Appmenu-GTK wuxuu furaa 13.1
Xaqiiqdu waxay tahay markaan rabo inaan sharaxo, ma aha mawduuc fudud bespin. Way sii socotaa, marka la eego dabeecadayda faahfaahsan ee noocan ah su'aasha.
Waxaan gabi ahaanba u hagaajiyaa wax kasta oo "ku habboon mawduuca", laga bilaabo cabbirka xarfaha ee cinwaanka cinwaanka, illaa iyo wax laga beddelayo astaamaha, haddii aan rabo iyo in kale oo aan yeelanayo kala-saarayaasha u dhexeeya badhanka "toolbars", iyo Sharaxaadda isticmaalahan adeegsadaha ayaa iga dhigaysa mid caajis badan oo caajis badan.
Samaynta qoraal ah "rakib" waa dhib badan tahay, iyo aragtidayda shaqsi ahaaneed, ma doonayo inaan "ku soo rogo" qaabkeyga iyo dulucdeyda, waxaan doorbidaa inaan tuso isticmaaleha sida aan u sameeyay, muujiyo sida uu ku heli karo isla natiijada aniga, laakiin inta hawshu socoto, ku dheji taabashadaada shakhsi ahaaneed.
Inay sameeyaan ama ka noqdaan sida ay doonaan, inay la qabsadaan raaxadooda iyo qaabkooda, maadaama xitaa berrito qof ku dhiirrigeliyay wixii aan sameeyay uu sameyn karo wax aan jeclahay oo iyadana igu dhiirrigelisa inaan wax badan sameeyo wax ka beddelid ama isbeddello.
Si la mid ah ayaan mar uun isku dayi doonaa inaan sameeyo nooc ka mid ah "baakad" si aan u rakibo haddii aad rabto, mawduuca qaab ka fudud "fudud".
Waa marki iigu horaysay ee aan tafatiro fiidiyoow waa nooc qariib ah xD haha
Iyadoo aan lahayn serenade dheeraad ah, halkan waxaad ku leedahay fiidiyow 1hr ah oo ku saabsan Kubuntu, oo aan ka bilaabo Kubuntu gebi ahaanba default oo anigu gebi ahaanba waan muujinayaa wax kasta oo aan sameeyo (tanina waxaa ku jira waxyaabo laga yaabo in qaar badani u yar yihiin sida tagista bogga 'X wax' iyo soo degsashada dulucda, qalad marka aad wax nuqulayso, iwm iwm xD) inaad uga tagto sidaan uga tegayo.
Fiidiyowgaan waxaa ka mid ah cayda marmar, markaan khalad ku sameeyo xiriiriye kale ama aan baajiyo soo dejinta qalad xD
Faahfaahin fiican waxaan kugula talinayaa inaad daawato dhammaan fiidiyowyada tayada ugu sareysa, waxaa lagu hagaajiyaa adigoo gujinaya giraangirta, kontoroolada fiidiyowga
Mawduuca Bespin: https://blog.desdelinux.net/tema-bespin-para-kde-inspirado-en-osx/
Appmenu-GTK wuxuu furaa 13.1
Hagaag markaa waxaan ka tegayaa fiidiyow kale, oo u dhigma sida loo rakibo gtk appmenu barakaysan ee ku jira Opensuse 13.1, looma saxarneyn xD, raalli ahaana dhawaaqa, waa inaan u beddelaa dhalada kuleylka ah buugga xusuusta, ka dib markay bilaabato inay la shaqeyso waxyaabo badan, qaboojiyuhu wuxuu sameeyaa buuq dhib leh haha
Xirmooyinka aan ku soo daray buuggayga gaarka ah:
Haddii ay dhacdo distros kale ama aysan shaqeyn, waxaad ku dari kartaa khadka la soo jeediyay:
dhoofinta UBUNTU_MENUPROXY = "libappmenu.so"
Hagaag taasi waxay ahayd, maadaama aan si buuxda ula jaanqaadayn qoraaladayda, waxaan u badinayaa inaan sameeyo qoraalo dheeri ah oo ah sii socoshada kan, anigoo ku dari doona waxyaabo (horudhac ahaan. Waxaan qorshaynayaa inaan wax yar ka hadlo waxqabadyada tusaale ahaan, iyo conky iyo KDE) xD
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » U habeynta KDE illaa xad
Xiiso leh, maadaama aan doonayo inaan sameeyo mawduuc, ku qor eOS KDE.
Waan diidanahay !!!!
Ah maya, raali ahow, waan ku wareersanahay qoraalka, horay ayaan tan kale ugu iri.
Shaqo aad u wanaagsan, haa mudane, si diirran ayaan kuugu hambalyeynayaa.
PS: Wiilasha waxay leeyihiin gus gabdhona waxay leeyihiin siil.
Kaydinta saddex-geesoodka ah waa sababta oo ah waxay ku siisay jeexitaan kde 4.11, sax? Waxaan ku tijaabiyay taxanaha nvidia 331 oo leh kde kii ugu dambeeyay ee 3 diro kala duwan daqiiqado yar ka dib vsync wuxuu joojiyaa inuu shaqeeyo.
Waxyaabaha seddex geesoodka ah waa sababta oo ah waxaan raadinayay sida looga dhigo fps, ma noqon karto taas oo leh gt540m waxaan lahaa fps hoos ilaa 18 markii aan daaqad aad u badan dhaqaajiyay, iwm, ka dib markii aan hawlgaliyay dhammaan waxqabadka wax badan ayaa kordhay, hada dib u dhaca kaliya ee aad uheli karto waa marka hobku nasto oo si lama filaan ah waxaan u waydiistaa animation of Kwin ilaa uu isbadalka ka dhigayo, waxaanan arkaa xoogaa dib u dhac ah, ka dib marka la eego fiidiyowyada waligey dhibaato iguma qabin. Aniga ahaan qalabkaaga waa inkaaran yahay, dhammaan walxaha kala duwan had iyo jeer way kugu qarxaan xD
Ma garanayo, kaliya waxaan iibsaday nvidia gtx 650 dhibaataduna waxay ahayd kaliya kwin.
Yaab, iskuxirka aad isiisay wuxuu sheegayaa in tani ay noqotay, kaliya «take eng that I comment, waa abuuraha bespin haha, waxaad isku dayi kartaa soo jeedinta uu halkaas ka soo jeedinayo: v
Maya lama xallin, waxa ay leedahay ayaa ah in la nuqullan yahay oo adiga laguugu wareejinayo tan kale:
@pandev ma haysto saxankaas sidaa darteed wax badan kaaama caawin karo, ma waxaad isku dayday waxa wiilku soo jeedinayo ee ku saabsan dhoofinta doorsoomaha? Dadka kale ee hoose waxay yiraahdaan in taas la sameeyay ayaa xallisay dhibaatada, sidoo kale waxaan u maleynayaa inay tahay wax lagu soo bandhigo golaha.
way ii shaqeyn weyday maxaa yeelay ma aanan fahmin meesha aan dhigayo khadkaas XD!
@ pandev92 sida uu ku yidhi halkaas waa inaad ku abuurtaa qoraal ~ ~ .kde4 / env / nvidia.sh oo aad u dhoofisaa doorsoomayaasha ay weydiisato (xusuusnow inaad siiso rukhsad dil), waa kan tusaale:
berrito sakhraamada ka dib, waxaan isku dayi doonaa XD
Boosto wanaagsan oo tilmaamaysa sida loo rakibo GTK appmenu waa inay muujisaa inay tahay appmenu GTK.
Dhinaca kale, adoo isticmaalaya KDE waa inaad ogaataa inaad ka abuuri karto barkad kuu gaar ah guddi, adigoon isticmaalin codsiyada sida Conky.
Ma aqaano haddii aadan arkeyn fiidiyowyada ama kaliya lagu hagayay qoraalada
1) fiidiyowga appmenu waxaan ku sheegayaa wuxuu yahay waxaanan tusayaa wax kasta oo aan rakibo iyo saamaynta ay soo saarto
2) fiidiyowga ugu horreeya, xirashadaydu waa uun… guddi kde ah oo leh icontask….
taasi waxba ma ahan…
Aad baan u habeeyay hadda KDE-du waxay isticmaashaa maktabadaha GTK
Waxba ka qaban maayo tan, laakiin runtii waan kugu hambalyeynayaa waana ku mahadsan yahay waqtiga aad siisay inaad la wadaagto oo aad ku kobciso bulshada GNU / Linux shaqadan.
Salaan iyo sanad wanaagsan.
Waxaan horeyba u maleeyay inay ahayd inaad ku rakibto Gentoo ama Funtoo, waxaan horeyba u soo qaatay dhibaatada, ama halkii waqtiga 🙂, sida ugu wanaagsan ee loogu adeegsan karo dhamaan baloogyada.
Laakiin ma lihi dulqaadka aan ku daawado fiidiyowyada, aniga oo ixtiraam mudan, fiidiyowyo badan oo jacayl ah waana wax fiican.
U badalida mowduuca halkaas, waxaan aqriyay in shaandhada shaandhaynta lagu samayn karo iyadoo lagu salaynayo codka aan doonayno inaan tirtirno, lama samayn, laakiin waa talo wanaagsan. Iyadoo dhiirranaan leh
Uff Waxaan doonayaa inaan ka ogaado shaandhaynta shaandhaynta, tafatirka fiidiyowga iyo deegaankaas oo dhan, waxaan ogahay xD aad u yar
Aad baad u mahadsantahay, fiiro gaar ah u yeelo tilmaamaha 😀
Miyuu ku shaqeyn doonaa Debian Wheezy kde? Ma xasuusto nooca uu yahay xD
Waxaan u maleynayaa in haddii xD
Maqaal aad u wanaagsan, dhibaato ayaan ku qabaa inaan dhexgalo gtk anigoo adeegsanaya lxappearance, sidoo kale waxaan isku dayay inaan u maamulo asal ahaan, laakiin ma shaqeyso, fadlan ii sheeg sidee uga dhigtay inay shaqeyso? Mahadsanid.
Ugu dambeyntiina waxaan la socdaa dulucda "adwaita" iyo asalka daaqadaha Bespin isla midabka ayaan dhigay. Hada kumbuyuutarka ma haysto laakiin hadaan si sax ah u xasuusto midabka Adwaita waa EDEDED (waxaad kuheleysaa xulaha midabka, zukitwo-ga waxaad sameeynkartaa wax lamid ah waxaad kadhigi kartaa bespin inuu qaato midabka asalka ah ee zukitwo) Waqtigaan sidan ayaan u sameeyay maxaa yeelay si aan u badalo midabka mawduuca gtk waxay soo baxday waqtigaas hadana markaan markaan isku dayay mar labaad khadkii aan wax ka faallaynayay ma muuqan sidaa darteed waxaan doortay inaan qaato midabka adwaita ama zukitwo ee kiiska isticmaalka zukitwo)
Xaqiiqdii waad saxan tahay, waa EDEDED, horeyba waxay umuuqatay mid aad ufiican, waad ku mahadsantahay kaalmadaada iyo qodobkaan, waxaan rajeynayaa inaad sii wado maqaalo badan si aad uhesho KDE. Mahadsanid
Waad salaaman tahay, marka loo eego "nacalad" lxappereance oo aan dhammayn shaqadii, ku darista isticmaale kale iyo wax badan oo aan maareeyay inaan ka dhigo mid shaqeeya, hadda haddii ay soo saarto xariiqda faylasha
ku dar "/home/javier/.gtkrc-2.0.mine"
oo loogu talagalay *** gtkrc2.0-kde4 ***
isku mid tani waxay ku socotaa dhamaadka faylka.
Waxaan isku dayay inaan si toos ah wax uga beddelo khadadkaas / usr / share / themes / laakiin murugada ima siiso xD ball
Fiidiyowyadu ma shaqeeyaan
Ku jawaab isma
Sida loo rakibo Openframeworks 0.8 Fedora 20